အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: ည ၁၁နာရီ။
ဒီပိုစ့်လေးကို ဖြစ်မြောက်လာစေတဲ့ မောင်...
Posted by တီချမ်း at 11:26 PM
Mae April 23, 2009 at 5:21 AM
စွံလိုက်တာ.. မောင်ရော ကိုကြီးရော ကောင်လေးရော၊ အဲ့ဒါလဲ ပညာပဲ
ဒီမှာလဲ ၁၁ကျော်ပြီ၊ ကြာဇံကြော် ကြည့်ပြီး ဗိုက်ဆာတယ်
မိုးခါး April 23, 2009 at 7:11 AM
တီရေ .. အရမ်းစားချင်သွားတယ်
ပီတိ(စိတ်ပညာ) April 23, 2009 at 7:30 AM
ဘာစာချက်ထားလဲတော့ မသိဘူး။ ကျောင်းမသွားခင် တိတိ မနက်စာဝင်စားသွားတယ်။
Phyo Maw April 23, 2009 at 7:36 AM
ကြာဇံဆို ပြုတ်ပဲစားတယ် အရည်နဲ့။
ready made လေးဖောက် ရေနွေးအိုးထဲထည့်။
နွေးနေခြည် April 23, 2009 at 8:25 AM
ဘေးက တရုတ်ကလည်း ကြာဇံကြော်စွဲနေတယ် တီချမ်းဆီလာတော့လည်း ကြာဇံကြော်နဲ့တိုးလို့ ဒီနေ့တော့ ကြာဇံကြော်နဲ့စတဲ့နေပဲ...
သဇင်ဏီ April 23, 2009 at 8:33 AM
နံပါတ်မှာ၆ဆိုတော့ စားဖို့ကျန်လောက်သေးတယ်.. :P
ဟိတ်.. မောင် ဆိုတာဘူတုန်း.. တီတီနော်. :D
wai April 23, 2009 at 8:55 AM
Special Thanks for your invitation. It is so Aloi ma ma (Sap ma in Isan).
I would take Nakhon Chai Air but to eat it.
Nakhon Chai Air Bus
Honey April 23, 2009 at 10:40 AM
တညကို ၄ ၅ခေါက်လာတဲ့ ကောင်းကင်ပြာပါနော်။ ဘာချက်ချက် လာစားပါတယ်၊ မချက်တတ်လို့ သူများချက်ထားတာတွေ ပဲ လာလာမျှော်နေရ သူပါ
Mogok Thar April 23, 2009 at 10:42 AM
ချစ်ဘောလော ချမ်း.. ချက်ကျွေးတဲ့ ကြာဇံကြော်..... ကောင်းမှကောင်း..
(ချစ်သူ လှိုင်လှိုင်ပေါပါတဲ့ ချစ်ကြသူ လှိုင်ဘောလယ်မို့ ချစ်ဘောလောဘွဲ့ပေးတာပါကွယ် ငှယ်ငှယ်.. စိတ်မဆိုးရဘူးဗျ)
ကောင်းကင်ပြာ April 23, 2009 at 10:42 AM
နာမည် မှားရိုက်မိလို့ တီရေ
အန်တီချမ်း April 23, 2009 at 10:44 AM
hi hi kwi kwi khi khi
flowerworld April 23, 2009 at 10:59 AM
တီချမ်းက ဘလော့ခ်မှာပဲတင်ကျွေးတယ်ပေါ့လေ မီးလေးကအပြင်မှာတကယ်စားမှာ
လုပ်ကျွေး လာခဲ့မယ် ပိတ်ရက်ကျရင်
sweetpeony April 23, 2009 at 12:49 PM
အကုန်စားသွားတယ်... (၀က်ဥချောင်းမပါ... မကြိုက်လို့...)။
ခုတော့ ၁ပန်းကန်ပဲချထားလို့ ၁ပွဲပဲစားသွားရတယ်...။
Anonymous April 23, 2009 at 4:21 PM
ချစ်တီရေ ........ နေမကောင်းဘူးတီရယ်.. မစားနိုင်ပေမယ့် တီကအပင်ပန်းခံပြီး ချက်ထားလို့လာစားတယ်နော်။ မောင်ကတီချက်တာစားချင်တယ်တဲ့။ အခုမှစားရတော့တယ်။ တီ့လိုဒီနေ့ မရယ်နိုင်တော့ဘူး။
Mr.Pu April 23, 2009 at 4:25 PM
ကြာဆံကြော်ဆို ပူးက တအားကြိုက်၊ ခဏခဏလည်း လုပ်စားတယ်။ အဲလေ ရောကုန်ပါပြီ။ ပူးဆိုတော့ ကြာဆံကြော် ဘယ်စားဖူးမှာလဲနော်..
Rita April 23, 2009 at 6:09 PM
ကဲကဲ စင်ကာပူ ပြောင်းမလာသေးဘူးလား
BKK ကနေ လှမ်း နှိပ်စက်မနေနဲ့တော့
သီဟသစ် April 23, 2009 at 7:42 PM
ရီတာက စင်္ကာပူ ရောက်ရင် ဘာလုပ်မှာပါလိမ့်..
ဘာတွေတုန်း April 23, 2009 at 9:59 PM
ချားလို့ ကောင်းမှကောင်း :)
mgnge April 24, 2009 at 4:59 AM
ခေါ်ကတည်းကလာချင်တယ် ... ကြာဇံဆိုလို့ သိပ်စိတ်မပါဘူး...။
အခုလောလောဆယ် စားချင်နေတာ က ၀က်သားနဲ့ မျစ်ချဉ်...။
၀က်က တော့ အသားမစား ဘူး...။ အဆီပဲစားတယ်..။ အသားစားချင် ရင် ဆိတ်သားနဲ့ ကြက်သား စားတယ်..။ ဖြစ်နိုင်ရင်ချက် ကြွေး..။ ဒါဗြဲ...။
လကုန်ရင်တော့ တကယ်ချက်စား ပြီ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်..။
အဲ့တော့မှတီချမ်းသွားရည်လာမကျနဲ့ မကျွေးဘူး(စတာ) ဟိဟိ
Anonymous April 25, 2009 at 12:30 AM
တီချမ်းရယ် ကြာဇံကြော်က ကောင်းမယ့်ပုံပါ။ ခန်းဟီ။ ဒါပေမယ့်ကျုပ်လာတုန်းက ရှင်ဟင်း မချက်ကျွေးပါဘူးနော်။ ကွေ့ တယိုတွေချည်းပဲ လိမ့် ဝယ်ကျွေးနေပြီးတော့။
တီချမ်း.. ကြာဆံက ပဲကြာဆံလား၊ ဆန်ကြာဆံပါလားရှင်၊ လာဖတ်ဖြစ်တာ မကြာသေးပေးမဲ့ တီချမ်းဆီက ဟင်းချက်နည်း နမူနာယူပြီး နန်းကြီးသုပ် လုပ်စားတာ အင်မတန်ကို အောင်မြင်ပါတယ်။ အခုလည်း ကြာဆံကြော် စားချင်လို့ ပါ။ ဒါပေမဲ့ ပဲကြာဆန်လား၊ ဆန်ကြာဆံလား မကွဲဘူး ဖြစ်နေလို့ ပါ။ အကြောင်းပြန်ပေးပါအုံးနော်။ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်
အန်တီချမ်း March 29, 2011 at 7:20 PM
ကြော်စားတာက ဆန်ကြာဇံ ပါ
ပဲကြာဇံ ကတော့ ပဲဟင်းထဲထည့်ချက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
နောက်မှ ယိုးဒယားစတိုင်လ် သုပ်ပြီး တင်ပေးပါအုံးမယ်
တီချမ်းရေ ဟိုနေ့ က မသိလို့ ပဲကြာဆံထင်လို့ ဝယ်လာတာ။ ဒီညနေဘဲ ဆန်ကြာဆံ ၀ယ်ပြီး ကြော်စားတာ ကောင်းလိုက်တာ။ အခု စားနေရင်းနဲ့ ရိုက်လိုက်တာ။ တီချမ်းမေးလ် သိရရင် ပို့ ပေးလိုက်မယ်လေ။ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားတယ်။ ကြက်သားရယ်။ ပဲသီးပြားရယ်။ ပန်းပွင့်ရယ်။ ဂေါ်ဖီရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီရယ်နဲ့ ကြော်ထားတာ။ ကောင်းလိုက်တာ မပြောပါနဲ့ တော့။ တီချမ်းဘလော့ဂ် ကို အသိနောက်ကျလေခြင်းနော်။ ကောင်းသောခရီးဖြစ်ပါစေလို့ ။
အန်တီချမ်း March 31, 2011 at 4:48 AM
စားရတာ အဆင်ပြေတယ် ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါတယ် အမည်မသိရေ
မနက်ဖြန် မနက် စောစော ခရီးထွက်တော့မယ်လေ
အီးမေးလ် က chenaddy@gmail.com ဆိုရင် ရောက်ပါတယ်
ပြန်လာမှ ဟင်းတွေ တင်ပေးအုံးမယ်နော်
သင်္ကြန် ကျရင် ပိတ်ရက်များတော့ ဟင်းချက်ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်